About Us - I-Xiamen Charmlite Co, Ltd.
Itholakala eXiamen, eChina, eyasungulwa ngonyaka we-2004, iXiamen Charmlite Co, Ltd. isibe ngomunye wabathengisi abaholayo embonini yezipho kanye nokukhuthaza kanye nomkhakha we-alcoholware eChina.
Impilo ingaba lula ngokuqamba kukaCharmlite. Njengomhlinzeki wokuhlonza kanye nomhlinzeki wezixazululo zomkhiqizo owodwa wephakeji, iCharmlite inamandla okuthola noma yimiphi imikhiqizo engenzeka kusuka ku-A iye ku-Z, ongayikhuthaza ngamalogo afanele wena.
Ngokusethwa kwemboni yayo esezingeni eliphansi i-Funtime Plastics (Xiamen) Co, Ltd. nasemigqeni yokubumba yendlu, iCharmlite inikezela ngokungaphezulu kokulethwa okusebenzayo, imikhiqizo emihle esezingeni eliphezulu kanye namanani ancintisanayo.
Njengenkampani enomthwalo wemfanelo, iCharmlite ibilokhu ifuna ubuchwepheshe obusha kanye nezinto eziluhlaza ngemikhiqizo esihlinzeka ngayo.
Ungalokothi uyeke ukuthuthuka isiqubulo sawo wonke amalungu eCharmlite.
Silangazelela ukuhlola imakethe nabalingani abahle njengawe.
I-Xiamen Charmlite Co, Ltd ikhiqize futhi yanikela ngezipho zokuphromotha ezisebenzayo kanye nama-premium ajabulisayo kwezinye zezinhlobo zezinkampani ezihamba phambili emhlabeni kanye nezinkampani ezifana neCoke, Disney, SAB Miller, Bacardi nokunye.
Njengamanje sine-database enkulu yemikhiqizo efana nezikhwama, amabhodlela okuphuza, izinto ze-elekthronikhi, amabhakede eqhwa, imikhiqizo yangaphandle, izinto zemidlalo njalonjalo, ezifanele kahle izenyuso zonyaka zonyaka, ukwethulwa komkhiqizo, imikhankaso yokuthengisa, ikakhulukazi isiphuzo kanye nomkhakha wokuphuza. Ukuhlangenwe nakho kwethu okubanzi nolwazi lomkhiqizo kusisize ukuba sithuthukise izipho zokuphromotha eziphumelelayo namaphrimiyamu wemikhiqizo edume umhlaba wonke nezinkampani zomhlaba.
UCharmlite uneqembu eliqeqeshiwe, elinolwazi lweminyaka engu-15 ekusingatheni ibhizinisi lamazwe aphesheya.
Sikuqonda ngokuphelele ukuthi ukulawulwa kwekhwalithi kuyinto ebalulekile futhi egxile kuyo. Abasebenzi abayi-6 be-QC abaqeqeshiwe babhekela amabanga ahlukahlukene wokukhiqiza abavakashela lapho bebheka ukukhiqizwa kusuka ezintweni ezinguluhlaza kuya kokupakisha ukuqinisekisa ukulethwa okufika ngesikhathi nemikhiqizo enhle yekhwalithi.
Umsebenzi wethu ukuvikela Brands Yakho kanye Izimpendulo.
UCharmlite wamukela ukubambisana okusha nabalingani baphesheya kwezilwandle, abathengi abathengayo namakhasimende aqondile.
I-Funtime Plastics (Xiamen) Co, Ltd.
I-Funtime Plastics (Xiamen) Co, Ltd. yasungulwa njengemboni yezokweseka iCharmlite ngonyaka ka-2013 ukufaka amakhono okuklama nokukhiqiza izinkomishi zepulasitiki egcekeni leplastikhi, izinkomishi ezishisayo nezithinta izimboni embonini ye-Amusement kanye nensizakalo yokudla kwendabuko kanye nomkhakha wokuphuza utshwala.
Kuze kube manje sinamamodeli angaphezu kwekhulu wezinkomishi zewadiye yensimbi engilazi nengilazi, kufaka nezinkomishi ezishibilikayo, amakamelo e-ale, amabhuzu ebhiya we-das, kanye namagceke e-Flash flashards anemisebenzi. Sinikeza izinkomishi kusuka kosayizi 8OZ kuya ku-100OZ, imibala ehambelana nePMS. Imikhiqizo yethu ithandwa kakhulu phakathi kwamakhasimende futhi ithola impumelelo enkulu emakethe, ikakhulukazi kuma-Carnivals, ama-Daiquiri Bar, ama-studio we-Universal, amapaki amanzi, ama-Zoos nezinye izikhungo zokuzijabulisa emhlabeni wonke.
Imishini engu-42, kufaka phakathi imishini yokujova, ama-extruders, imishini yokushayela kanye nemishini yokufaka uphawu ethuthukile iqinisekisa ukuthi imikhiqizo yekhwalithi kanye nokulethwa okufika ngesikhathi kufika kithi okungama-99.9%. Imigqa yethu yokubumba yangaphakathi nasendlini ilungele izinto ezikhulunyiwe futhi isebenzisa imibono yakho emisha ekupheleleni.
I-Funtime Plastics ithole izidingo zezindlela ezizungezile zemvelo. Ngenye indlela, sakha ingilazi ye-reusable reilable, imitshingo ye-champagne kanye nokuwa okonqenqema. Ngenye indlela, sifuna ubuchwepheshe obusha sisebenzisa i-PLA nezinye izinto ezi-eco-friendly ukukhiqiza izinkomishi nengilazi yegceke. Cishe sikhona!
Inhloso yethu ukuba ngumhlinzeki wakho wezixazululo zokuphuza utshwala esisodwa.
Umsebenzi wethu ukuhlinzeka izinkomishi ezinhle futhi uthuthukise impilo yekhwalithi.
Ngibheke phambili ekwenzeni imikhiqizo ephumelelayo nawe.
Isikhathi sokusebenza sinama-Disney FAMA, i-BSCI, amaMerlin Audit, njll. Lokhu kucwaningwa kuvuselelwa njalo ngonyaka. Ngezansi izithombe zezitifiketi ezithile.